Biyo-la’aantii Jigjiga oo ka sii dareysa – Radio Daljir
Janaayo 12, 2020 7:34 g 0
Tan iyo sidii uu u gudhay biyoxidheenka ugu mug iyo baaxadda weynaa DDS, kuna yaal duleedka Jigjiga, ayaa waxaa isa soo taraya biyo-la’aan baahsan oo ragaadisay dhammaan magaaada Jigjiga iyo nawaaxigeeda.
Jigjiga kaliya ma ahee biyoxidheenka waxaa si gaar ah uga faa’iideysan jirey oo noloshoodu aad ugu xirneyd shacabka xoolodhaqata ah iyo waliba beeralayda deegaanka.
Biyoxidheenka oo looga dhaamiyo guud ahaan magaalada Jigjiga iyo nawaaxigeeda ayaa hadda waxa uu sababay iyo dadka deegaanka ay la soo daristo xaalad adag oo biyo la’aan ah. Ma jiro gurmad ama qorshe dowladeed oo illaa iyo hadda shacabka laga wargaliyey.
Guud ahaan shacabka labaatanka xaafadood ee magaalada jigjiga ay ka koobantahay ayaa biyo-la’aantu la soo daristay. Shacabka Jigjiga ayaa aad u dhaliilaya Wakaalada Khayraadka Biyaha oo ay ku sheegeen mid ka gaabisay adeegyadii deegaanku uga baahnaa.